ကိုဈာန်: သူပုန်တယောက်၏ နိဒါန်း
နှစ်နာရီမျှ ကျနော်တို့ လျှောက်ခဲ့ပြီးသည့် အခါတွင်မူ ကားသံများအား သဲ့သဲ့ ကြားရပြီ ဖြစ်သည်။ ဖြေးဖြေးမှန်မှန်သာ လျှောက်ခဲ့ကြသည်ဖြစ်၍ မပင်ပန်း …။ လမ်းက အတက်အဆင်းမရှိ…..။ လူသွားလမ်းအတိုင်း မသွားပဲ တောတိုး၍ လာခဲ့သည့်အတွက်သာ ခရီးက ဖင့်၏။ စမ်းချောင်းငယ်အတိုင်း သွားသည့်အခါ သွားသည်။ ၀ါးတောကြီးအတွင်း ဖြတ်၍ သွားသည့်အခါ သွား၏။ ကားသံများက တခါတခါ ကျယ်၍လာသည်။ တခါတခါတွင်မူ သဲ့သဲ့မျှသာ …။ အသံက လေယူရာတိမ်း၍ တိုးလိုက် ကျယ်လိုက်…..။
ဤကားသံများက အန္တရာယ်သံများ …။ ကားသံများနှင့် နီးလာလေ … အန္တရာယ်နှင့် နီးလေ ဖြစ်သည်။ စစ်တပ်က နှစ်စဉ် `ဖာပွန်´သို့ ရိက္ခာပို့သည်။ TE 11- စစ်ကားကြီးများနှင့် ပို့ခြင်း ဖြစ်၏။ အခေါက်ခေါက် အခါခါ …။ တခေါက်လျှင် ယာဉ်အစီး လေးငါးဆယ်မှ ရာကျော်အထိ ပါတတ်သည်။ သူတို့ အသုံးပြုသည့် လမ်းကား … သိမ်ဆိပ်၊ ပိန္နဲတောလေးကေမှ ကျသောင်းဆိပ် လဂွန်ပြို ဖာပွန်လမ်း ဖြစ်သည်။ လမ်းက လမ်းကြမ်း …..။ လမ်းလုံခြုံရေးအတွက် စစ်ဗျူဟာ (၃)ခုခန့် သုံး၏။ တပ်ရင်း ၉-ရင်းအင်အားနှင့် လမ်းကင်းချထားခြင်း ဖြစ်၏။ လက်ယှက်ထိုးထားသကဲ့သို့ …….။
ကျနော်တို့က ဤကြားမှ ဤလမ်းအား ဖြတ်ကျော်ကြရမည် ဖြစ်သည်။
`ကျနော်တို့ရှေ့မှာ ခဏနားကြပြီး သတင်းထောက်ပြီးတော့မှ ကားလမ်းကူး ကြမယ်…..´
ဖဒို့အောင်ရွှေက ကျနော်တို့အား ပြောသည်။ နားမည့်နေရာအား ကျနော် ကြည့်မိ၏။ တောင်ယာဟောင်း …..`ဖုန်းဆိုးမြေ´။ တောင်ယာက မို့မို့လေး မြင့်တက်သွားသည်။ တောအုပ်နှင့် တောင်ယာအကြား အနိမ့်ပိုင်းတွင် စမ်းချောင်းငယ်တခုက ရစ်ခွေထား၏။ တောင်ယာအား အနားသတ်မျဉ်းအဖြစ် စမ်းချောင်းငယ်သည် မြောက်မှတောင်သို့ ခွေရစ်၍ ထား၏။ ချောင်းငယ်အတွင်းသို့ ကျနော်တို့ ဆင်းလိုက်၏။ ချောင်းရေက ခြေမျက်စိမြုပ်ရုံမျှသာ….။ သဲချောင်းလေးဖြစ်၍ အေးစိမ့်၍ နေသည်။ ဖားလောင်းလေးများ အုပ်လိုက် ကူးခတ်နေသည်ကို တွေ့ရ၏။ ကုန်းမို့မို့ပေါ်သို့ ကျနော်တို့ တတ်ခဲ့ကြပြန်သည်။ ထိကရုံး ဆူးပင်များက တောထ၍ နေသည်။ ပိဇပ်ရိုင်း ပင်များ၊ မြက်ရိုင်းပင်များက လူတရပ်မက …..။
ဖုန်းဆိုး၏အလယ်တွင် တောင်ယာတဲပျက် တလုံးရှိသည်။ အမိုးမရှိ….၊ အခင်းမရှိ….။ မဓမ တိုင် ထိုးထိုးထောင်ထောင်များကသာ ……။ ယခင်က တောင်ယာခင် ရှင်တို့ နေခဲ့သည့် တဲဟူ၍ ပြောနိုင်တော့သည်။ တဲပျက်တွင်ပင် ကျနော်တို့ နားကြ၏။ ဖဒိုအောင်ရွှေနှင့် ပါလာသော KNU ရဲဘော်လေး ၃-ယောက်က ရှေ့သို့ ဆက်သွားပြီး ကင်းပုံးဝပ်၍ နေရာယူထားကြသည်။ ကားလမ်းနှင့် နီးပြီဖြစ်၍ ရန်သူက လမ်းလုံခြုံရေးအတွက် ကင်းရှည်လှည့်တတ်သည်။ သတိထားရမည့် နေရာ …..။
ကျနော်တို့နားပြီး အတန်ကြာမှ …. ဦးမောင်မောင်လတ် ရောက်လာသည်။ သူက….ဘီးလင်းမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တဦး ဖြစ်သည်။ ဆင်ခြေလျောလေးအတိုင်း သူတက်လာသည်မှာ ပေ ငါးထောင်အမြင့် စောက်ကမ်းပါးကြီးအား တက်နေသည်နှင့် တူတော့၏။ သူ့အသက်ရူသံက ခပ်းလှမ်းလှမ်းမှပင် ကြားနေရ၏။ ချွေးသီးချွေးပေါက်များက သူ့မျက်နှာတွင် ရွစိထနေသည်။ ရေနှင့် ဖျန်းပက်ထားသကဲ့သို့…..။ တိုက်ပုံ အင်္ကျီအနက်၊ တတ်ထရွတ်ပုဆိုး ကချင်ကွက် အစိမ်းအောက်၌ သူ့ခန္ဒာသည် ပိန်လှီလွန်းလှ၏။ ဖြူရော်သော် အသားရောင်သည် သွေးဆုတ်သွားသည့် လူသေတဦးကဲ့သို့ …..။ ဆံပင်တို့က ရှည်၍ ပွယောင်းနေသည်။
သူလမ်းလျှောက်နေသည်မှာ ….၀ိဥာဉ်တကောင် လွင့်ပါးနေသည့်အလား…။ ကျနော်တို့အနား၌ သူဝင်၍ ထိုင်လိုက်သည်။ သူအသက်ရှုနေသည်မှာ ခက်ခဲ ပင်ပန်းလွန်းလှ၏။ သူ့အဆုတ်သည် ညှစ်ရဖန်များ၍ ပွင့်ထွက်လာလေမည်လား ထင်ရသည်။
ကျနော်တို့ သက်သက်သာသာ သွားခဲ့ရသည့်ခရီးအား သူသည် ပင်ပန်းလွန်းစွာနှင့် လာခဲ့ရ၏။ သူ့အခြေအနေအား ဖဒို့အောင်ရွှေလည်း သတိထားမိ၏။ ရှေ့ခရီးက သွက်သွက်လက်လက် သွားရမည်။ ရှောင်ရ တိမ်းရမည်။ ရန်သူကြားမှ ဖြတ်ကျော်သွားရမည် ဖြစ်၍ ပြေးပြေးလွှားလွှား သွားရကောင်း သွားကြရမည်။ သူ့အခြေအနေနှင့် ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား ….။ သူ့ကျန်းမာရေးက လိုက်နိုင်ပါ့မလား…..။
ကျနော်တို့ အစီအစဉ် ပြောင်းကြရသည်။ ပထမက ဖုန်းဆိုးမြေတွင် ခဏနားပြီး ….. ကားလမ်းအား ဖြည်းဖြည်းချင်း ကပ်မည်။ ကားတန်းအားလုံး လွန်သွားပါက ဖြတ်ကူးရန် ဖြစ်သည်။ ယခုမူ ဤအတိုင်း သွား၍မဖြစ်တော့…..။ ဦးမောင်မောင်လတ်က လိုက်နိုင်မည့်ဟန်မပေါက်……။ နားရမည်။ သူ့အား ဆေးမှူးနှင့်ပြပြီး ကုသပေးရမည်။ ပြီးမှ …. ခရီးအား ဆက်ကြရမည်။
ဖဒိုအောင်ရွှေက လမ်းလျှောက် စကားပြောစက်ဖြင့် ဆေးမှူးတယောက်အား ခေါ်၏။ တနေရာတွင် ဆုံရန်ချိန်း၏။ ကျနော်တို့ ယခုရောက်နေသည့် နေရာမှ မိနစ် ၂၀-ခန့် သွားရမည်။ ကျသောင်းဆိပ်ရွာနှင့် ကြိုးဝိုင်းအကြားတွင် ဖြစ်သည်။
၀ါးလုံးတွင် ပုခက်ဆင်ပြီး ဦးမောင်မောင်လတ်အား ကျနော်တို့ ထမ်းကြရ၏။ အရှေ့တယောက် အနောက်တယောက်…..။ ဖုန်းဆိုးမြေမှ တောင်ဖက်ဆီသို့ ပြန်ဆင်းခဲ့ကြ၏။ တက်နေဖြစ်သော်လည်း တပေါင်းနေက ပူပြင်းသည်။ ကျသောင်းဆိပ်ရွာအား ကွင်းရှောင်ပြီး သွားကြသည်။ ကျသောင်းဆိပ် ရွာတွင်က ရန်သူ၏ နည်းဗျူဟာ (၃၃၁) ရှိသည်။ ဆယ်မိနစ်ခန့် လျှောက်ပြီးသည်နှင့် လယ်ကွင်းအား တွေ့ရ၏။ လယ်က မလုပ်ပဲ ထားသည့်အတွက် `ကော´ ၍နေပြီ။ လယ်ကွင်းအား တည့်တည့် အလယ်မှ မဖြတ်ရဲ…..။ ရန်သူနှင့်တိုးပါက သတ်ကွင်းအတွင်း သွားသလို ဖြစ်နေမည်။ လယ်ကွင်းအား ကွင်း၍ ခင်းတန်းလေးအတိုင်း သွားကြသည်။ ခရီးကရှည်၏။ ထမ်းစက မလေးသော်လည်း ကြာလာသည့်အခါ၌ ပုခုံးများက ကြိမ်းလာသည်။ လယ်ကွင်းဆုံးသည်နှင့် ရွာအ၀င်လမ်းအား တွေ့ရ၏။ ရွာက ရွာပျက်……။
စစ်သားများ အလုံးအရင်းနှင့် တက်လာခဲ့သည်မှစ၍ ….. ရွာသားများ ရွာတွင်မနေရဲ….။ လယ်ထဲသို့ မဆင်းနိုင်…..။ တောင်ယာသို့ မသွားနိုင်ကြတော့…..။ ဤဒေသတွင် …. ရွာများက ရွာပျက်…..။ လယ်များက ကော၍ နေသည်။ တောင်ယာတို့က ဖုန်းဆိုးမြေ…..။
ရွာအတွင်းသို့ ရောက်၏။ အုန်းပင်များ၊ ကွမ်းသီးပင်များနှင့် အုပ်အုပ်ဆိုင်းဆိုင်း…..။ အိမ်ခြေငါးဆယ်ကျော် ရှိခဲ့မည့် ရွာဖြစ်မည်။ ယခုတော့ ….. ထရံများ ကွာကျနေသော အိမ်၊ အမိုးပွင့်နေသော တဲ….။ အခင်းပြုတ်နေသော ဇရပ်တို့သာ ရှိတော့၏။ ရွာလယ်တွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း ရှိ၏။ ဘုန်းကြီးကျောင်းကမူ မပျက်ယွင်းသေး…..။ ယခင်က ဤရွာလမ်းတလျှောက် ခလေးငယ်တို့ လုံချည်ကွင်းသိုင်းနှင့် ပြေးလွှားကစားကြမည်။ သက်ကြီးရွယ်အိုတို့က အခါကြီးရက်ကြီးများတွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသို့ သွား၍ သီလ ဆောက်တည်ကြမည်။ ကြေးစည်သံတို့က လွင်နေလိမ့်မည်။
ယခုတော့ ရွာက တစပြင် …..။ သုသာန်ကဲ့သို့…..။
ဖဒိုအောင်ရွှေ၏ ရဲဘော် ၃-ယောက်အား ဘုန်းကြီးကျောင်းအတွင်း ကင်းရှည်အဖြစ် ထားခဲ့ပြီး ကျနော်တို့ ရွာ၏ မြောက်ဖျားပိုင်းသို့ ဆက်၍ ထွက်ခဲ့ကြသည်။ ရွာမြောက်ဖျားပိုင်းက ကုန်းမို့မို့ပေါ်တွင် ရှိ၏။ ဆုတ်ရန်၊ ရှောင်ရန် လွယ်ကူသည်။ ကျနော်တို့ နားကြပြီး ခဏတွင်ပင် ဖဒိုအောင်ရွှေ လှမ်းခေါ်ထားသည့် ဆေးမှူး ရောက်လာ၏။ ခမောက်ဆောင်းပြီး ပလိုင်းတလုံး လွယ်ထားသည်။ အရပ်ဝတ် အရပ်စားနှင့်ပင်။ မသိပါက KNU မှ ဆေးမှူးဟူ၍ မသိနိုင်။ ပျောက်ကျားရဲဘော် ပီသလှ၏။ ကွမ်းတမြုံ့မြုံ့နှင့် လူနာအား ကြည့်၏။ သွေးပေါင်ချိန်သည်။ ကိုယ်အပူချိန် တိုင်း၏။ အင်္ကျီအား လှန်၍ ကျောပြင်အနှံ့ လက်ခေါက်နှင့် ဖွဖွထု၏။ နားကြပ်နှင့် ထောက်၍ စမ်းသပ်၏။
`အဆုတ်ပွပြီး အဆုတ်ထဲ ရေ၀င်နေတယ်။ စုပ်ထုတ်လိုက်ရင် ကောင်းသွားမှာပါ´
ကွမ်းငုံထားသည့် အသံနှင့် ဆေးမှူးက ပြောသည်။ သူ့ပလိုင်းအတွင်းမှ ဆေးထိုးအပ်နှင့် `ဆလင်း´ အားထုတ်၏။ အပ်က ရှည်သည်။ တုတ်၏။ `ဆလင်း´ က ကြီး၏။ နွားများ၊ ကျွဲများအား ထိုးသည့် အပ်နှင့်ဆလင်းမျိုး…..။
`ဟန်းကော´ တွင်ထည့်ကာ `အပ်´နှင့် `ဆလင်း´ အားပြုတ်၏။ မပျက်မစီး ကျန်နေသည့် တဲငယ်၏ ၀ါးကွပ်ပျစ်ပေါ်တွင် လူနာအား လဲလျောင်းစေ၏။ အမိုးမရှိတော့သည့် တဲငယ်သည် ချက်ချင်းပင် စစ်မြေပြင် ဆေးရုံ ဖြစ်သွား၏။ လူနာအား တစောင်းလှဲစေ၏။ အင်္ကျီအား လှန်သည်။ ပြီးလျှင် …. အရက်ပျံ ဆွတ်ထားသော ဂွမ်းစနှင့် လက်ဖျံနှစ်ခုအကြား ကျောပြင်အား ပွတ်တိုက်၏။ ထိုနောက် ….. အပ်အား အဆုတ်ဆီသို့ ထိုးသွင်းသည်။ သူ့ဟန်က တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်။ သူ့အလုပ်အပေါ် ယုံကြည်မှု အပြည့်ရှိသည့် သဏ္ဍာန်က သူ့မျက်နှာတွင် အထင်သား ……။ သူ့လက်က ဆလင်းအား စုပ်ယူလိုက်သည်။ လူနာ၏ အဆုတ်အတွင်းမှ ရေများ ဆလင်းအတွင်းသို့ ရောက်လာသည်။ ဆလင်းအတွင်း ပြည့်သွားသည်။ အပ်ကို မဖြုတ်ပဲ ဆလင်းအား အပ်မှ ချွတ်လိုက်သည်။ ပြီးလျှင် ….. အနီးရှိ ရေခွက်ထဲသို့ ထိုးထုတ်လိုက်သည်။ ဆလင်းအား အပ်တွင် ပြန်၍တပ်၏။ စုပ်ထုတ်၏။ တကြိမ်…..နှစ်ကြိမ်…..သုံးကြိမ်။
လီတာဝက်ခန့် ရေများ ထွက်လာ၏။ ဆေးမှူး၏ လှုပ်ရှား ဆောင်ရွက်နေသည်အား ကြည့်ရင်း ….. ကျနော်စိတ်၌ `နော်မန်ဘီသွန်´အား အတွေးရောက်စေ၏။
၁၉၃၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ နောက်ဆုံးအပါတ်၏ နေ့တနေ့တွင် ဒေါက်တာ နော်မန်ဘီသွန်သည် ဒဏ်ရာရ စစ်သည်တစုအား ခွဲစိတ် ကုသနေခဲ့၏။ ခွဲစိတ်ခန်းသုံး လက်အိတ်မရှိ …..။ လက်ကြီးဗလာနှင့် ခွဲနေသည်။ ခွဲစိတ်ရင်း သူ၏ လက်ဝဲဖက်လက်အား ခွဲစိတ်ဓါး ထိသွားခဲ့၏။ ပိုးသေစေရန် အိုင်အိုဒင်း ဆေးရည်ထဲသို့ သူ့လက်ကို ချက်ချင်း ထိုးနှစ်လိုက်၏။ ပြီးလျှင် …. ခွဲစိတ်မှုအား ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သည်။ ဤသို့ ခွဲစိတ်နေစဉ် လက်ဓါးထိသည်မှာ ဒေါက်တာ နော်မန်ဘီသွန်အတွက် မဆန်း…..။ အကြိမ်ကြိမ် ရှိ၏။ ယခုလည်း အရင်ကကဲ့သို့ပင် အနာ ကျက်သွားလိမ့်မည်ဟု ဒေါက်တာဘီသွန် ယုံကြည်၏။ သို့သော် အနာက မကျက် …..။ ပြည်တည်လာ၏။ ပြည်တည်အနာကို ဖောက်ထုတ် ဆေးကြောသော်လည်း မထူးခြား….။ ပျံနှံ့၍သာ နေခဲ့၏။ လက်မောင်းတခုလုံး ဖူးယောင်ဖောင်းပွ လာခဲ့ပြီ။ သူကား သွေးအဆိပ်သင့်ခဲ့ပြီ။ သူတကိုယ်လုံး သွေးအဆိပ်သင့်မှုကား ပျံ့နှံ့လို့ နေခဲ့ပြီ။ ၁၉၃၉ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၂ နေ့တွင် ဒေါက်တာ နော်မန်ဘီသွန်သည် တရုတ်ပြည်၏ စစ်မြေပြင်၌ပင် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။
ဆေးမှူး၏ လူနာအား ပြုစုကုသမှုက ပြီးလေပြီ။ ဆေးပစ္စည်းများအား ပလိုင်းအတွင်းသို့ ပြန်ထည့်၏။ ပြီးလျှင် …. ကွမ်းပေါင်းနှင့် ထုံးဗူးအား ထုတ်၍ ယာနေ၏။
ဇန်န၀ါရီ ၁၅ ရက်၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ်
(မဇ္ဈိမ အင်တာနက်စာမျက်နှာမှ ကူးယူဖော်ပြသည်။)
Posted by ကိုဈာန် at 9:55 AM